१ Best सर्वश्रेष्ठ अन्तिम कट प्रो विन्डोज विकल्पहरू (२०२०) - सफ्टवेयर
जब यो भिडियो सम्पादनको कुरा आउँदछ, जस्तो मेमेराइजिंग भिडियोहरू सिर्जना गर्न वास्तविक सम्पादन। सोचविचारको तरीका बदल्न सक्ने शक्ति भएका भिडियोहरू र कुन आँखाले साँच्चै सुन्दर मान्दछन्। आजको अत्याधुनिक प्रविधिले केवल एक सुन्दर क्षण क्याप्चर गर्न मात्र अनुमति दिँदैन तर उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक र आकर्षक बनाउँदछ। फाइनल कट प्रो आजको टेक्नोलोजिकल प्रगतिको त्यस्तै एक acme हो।
Final Cut Pro - संक्षिप्त जानकारी
यस तस्विर सम्पादन सफ्टवेयरसँग सब भन्दा एक पेशेवर सम्पादक र एक दिन-दिन-दिन उपयोगकर्ताले सोध्ने भन्दा बढी छ। यो व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ र यसको छिटो र सजिलो प्रयोग सुविधाहरूको कारण लोकप्रिय छ। यी सुविधाहरू सबै भन्दा राम्रो विवरण र लायकको समयको लागि पूर्ण भिडियो बनाउन मदत गर्न सक्दछ। भिडियोको साथ, तपाईं अडियोलाई प्रभावकारिता पनि कम गर्न सक्नुहुनेछ लागत र समय अपव्यय कटाई। पूर्ण भिडियो सम्पादनका लागि यस अन-प्लेस प्रयोग गरेर धेरै स्ट्रिमरहरू लाखौं अनुयायीहरूमा पुगेका छन्।
विकल्पको लागि आवश्यक:
जे होस् नतीजा डिलिभरीमा सही, Final Cut Pro प्रयोग गरेर यसको फाइदाको हिस्सा हो। सबै भन्दा पहिले, संगत उपकरणहरूको एक सीमित संख्या हो। अन्तिम कट प्रो केवल म्याक ओएसमा उपलब्ध छ जुन शक्तिशाली संपादनको साथ यसको शक्तिशाली आवश्यकताहरू प्रदान गरेर जायज छ। अझै म्याक भन्दा धेरै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरू छन् र सबै म्याक उपकरणहरू वहन गर्न सक्दैन।
किफायती पनि एक Final Cut Pro वैकल्पिक को आवश्यकता समर्थन एक कारक हो। सफ्टवेयर भुक्तान गरिएको छ र तपाईंले7377..88 pay तिर्नु पर्छ र यो सबै नवोदित सम्पादन कलाकारहरूको लागि बजेट भन्दा बाहिर छ। यद्यपि एक पटकको लगानी मानिए पनि यो जायज देखिन्छ, किनकि यो नि: शुल्क अपडेट गरिएको छ। तर यो मूल्य दायरा नयाँ प्रयोगकर्ताहरू र बढ्दो भिडियो सिर्जनाकर्ताहरूसँग बोल्दैन। लागत यति धेरै छ कि तपाईं यती धेरै पैसाको साथ DSLR खरीद गर्न सक्नुहुन्छ!
विन्डोजमा आईमोभी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ? जाँच गर्नुहोस् विन्डोज १० को लागी उत्तम iMovie विकल्प हाम्रो ब्लग सेक्सन बाट।
अन्तिम कट प्रो विन्डोज विकल्पहरू - पेशेवर र विपक्ष
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको साथ सुरू गरेर जुन Final Cut Pro वैकल्पिक पूर्ति गर्दछ कि त्यो विन्डोजहरूको लागि उपलब्ध छन्। विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा दिइएको, यो पक्कै राम्रो छ। वैकल्पिक सफ्टवेयर Final Cut Pro भन्दा कम सस्तो छ सुविधाहरूमा थोरै वा फरकको साथ। सफ्टवेयर पनि कम हार्डवेयर मांगको छ र विन्डोजहरूको लागि यसको आफ्नै भत्ताहरू छन्। यो म्याक भन्दा थोरै बढी उपयोगकर्ता अनुकूल छ।
यदि तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो सम्पादन र सफ्टवेयरको खोजी गर्दैछ तपाईंको विन्डोजबाट सुरू गर्न, वा तपाईं व्यावसायिक हुनुहुन्छ। यो १ software सफ्टवेयरमा तपाईको सृजनात्मकताको विकासका लागि चाहिने सबै कुरा छ। Final Cut Pro को तुलनामा सबैकुरा उत्तम र सन्तुलित। रचनात्मकता आउटपुटमा कुनै comPromise बिना, यी अन्तिम कट प्रो विकल्पहरू प्रयास गर्नुहोस्।
१. एडोब प्रीमियर प्रो सीसी
एडोबले बनाएको यस भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर भन्दा राम्रो अन्तिम कट प्रो विकल्प हुन सक्दैन। यो फोटो पहिलो पटक सुरू भएदेखि नै फोटो सम्पादनको क्षेत्रमा निवास अतुलनीय थियो। भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो १ rad 199 १ मा सुरू गरिएको एडोब प्रीमियरबाट अपग्रेड गरिएको थियो। यो व्यावसायिक प्रयोगको लागि मात्र सिर्जना गरिएको हो, जबकि यो सफ्टवेयरको अर्को संस्करण 'एडोब प्रीमियर एलिमेन्ट्स' व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हो।
सफ्टवेयर सीएनएन र बीबीसीद्वारा प्रयोग गरिएको छ। डेडपूल, गिन गर्ल, र टर्मिनेटर डार्क जस्ता लोकप्रिय फिल्महरू एडोब प्रीमियर प्रो प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका छन्। तपाईं उच्च रिजोलुसन भिडियोहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ १०,२40० x,, १22२ रिजोल्युसन दुबै RGB र YUV मा। यसले थ्रीडी सम्पादन, अडियो-सम्पादन, र VSR अडियो प्लग-इन समर्थन अनुमति दिन्छ। सबै आधारभूत प्रसारण-स्तर सम्पादन र आवश्यक भिडियो-सम्पादन यस सफ्टवेयरमा गर्न सकिन्छ।
लोकप्रिय अन्तिम कट प्रो विकल्प, एडोब प्रीमियर प्रो मा, भिडियो, अडियो र ग्राफिक्स आयात गर्न सक्छ। तपाईं वितरण तयार ढाँचामा सम्झौता बिना सम्झौता बिना भिडियोहरू निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोमा प्रभावहरू थप्नुहोस्, क्लिप र चित्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई मिक्स गर्नुहोस्, र शीर्षकहरू सफ्टवेयरमा अनुप्रयोग सम्पादन गर्दा। यसले भिडियो स्वरूप र एकीकृत अनुप्रयोगहरूको ठूलो संख्या समर्थन गर्दछ।
प्रीमियम गुणवत्ता भिडियो रिजोलुसन
समर्थित फाईल ढाँचाहरूको ठूलो संख्या
कुनै नि: शुल्क संस्करण, नि: शुल्क परीक्षण मात्र उपलब्ध छ
अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकता
प्रीमियर प्रो एकल अनुप्रयोग ₹ १,675..60० / महिनामा
मा व्यवसाय₹ २,3००.00 / महिना
२. कोरल भिडियोस्टुडियो अन्तिम
यदि तपाईंलाई लोकप्रिय ग्राफिक्स डिजाइनिंग अनुप्रयोगहरूको बारेमा थाहा छ भने तपाईंसँग कोरेलको बारेमा कडा हुनै पर्छ। यदि त्यहाँ एडोब फोटो सम्पादनको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धी छ भने, निश्चित रूपमा यो Corel हो। १ 198 55 मा बनेको यस कम्पनीले CorelDraw लाई ग्राफिक डिजाइनिंग सफ्टवेयर प्रक्षेपण गर्‍यो जुन यति व्यापक रूपमा लोकप्रिय भयो कि यो अझै अतुलनीय छ। ग्राफिक्स फाँट एस्ड गरेपछि कोरेलले भिडियो सम्पादन पनि हावी हुन कोरेल भिडियोस्टुडियो सुरू गर्‍यो!
भिडियो गुणस्तर र प्रसंस्करणको मामलामा, यो अन्तिम कट प्रो विकल्प व्यापक रूपमा विश्वास गरिन्छ। अन्तिम कट प्रोको तुलनामा, यस सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबै छ र भिडियो सम्पादकको रूपमा स्ट्यान्डआउटको लागि अतिरिक्त। तपाईं प्रिमियम प्रभावहरू र उच्च-रिजोलुसन भिडियो सम्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ p२०p देखि २10१०p अनौंठो सम्पादन उपकरणहरूको साथ।
यससँग २,०००+ भन्दा बढी फिल्टरहरू छन्, तपाईंको अर्को १०००+ भिडियोहरूको लागि प्रयोगकर्ताका लागि पर्याप्त। योसँग अनुकूलनयोग्य फिल्टर, र color्ग ग्रेडिंग, र ट्रान्जिसनहरू पनि छन्। योसँग एक स्क्रीन रेकर्डर छ जुन तपाईं रेकर्ड वेबक्याम सुविधाको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। योसँग NewBlueFX, बोरिस FX, र ProDAD पनि छ। Corel VideoStudio Ultimate प्रयोग गर्नुहोस् रचनात्मक र पेशेवर सम्पादन भिडियो बनाउनुहोस्।
२०००+ फिल्टर र बहु ​​सम्पादन उपकरणहरू
उच्च-रिजोलुसन भिडियो सम्पादन
विश्वसनीय र पेशेवरहरू द्वारा प्रयोग
कुनै नि: शुल्क संस्करण उपलब्ध छैन
पूर्ण संस्करण एक पटक मा मा₹,,8। ०
पुरानो संस्करणबाट अपग्रेड गर्नुहोस्₹7.7१।
नि: शुल्क परीक्षण संस्करण -०-दिनहरूको लागि उपलब्ध
Av. Avid Media संगीतकार
यो सफ्टवेयर फिल्म उद्योगमा लोकप्रिय र व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। सन् १ int। Mac मा म्याकिन्टोशका लागि रिलीज गरिएको थियो, थप घटनाक्रमका साथ यसको नयाँ संस्करणहरू विन्डोजमा पनि जारी गरिएको थियो। अन्तिम कट प्रोको तुलनामा, यो सफ्टवेयरले विन्डोजको जस्तो समान गुण र सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयरसँग सहज ज्ञान युक्त डिजाइन र सजिलो प्रयोगकर्ता इन्टरफेस छ। सफ्टवेयरको versions संस्करणहरू छन् र स्ट्यान्डअलोन सफ्टवेयरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो अन्तिम कट प्रो वैकल्पिक समय-कुशल यसको अद्वितीय सुविधाहरू र राम्रोसँग निर्मित ईन्टरफेसको साथ, समयको साथ पूर्ण हुन्छ। सफ्टवेयर व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो धेरै उपकरणहरू, उत्तम र corre्ग सुधार, र VFX को साथ प्याक गरिएको छ। तपाईं भिडियो गुणस्तर मेल गर्न ध्वनि सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र आवाजलाई तपाईंको सिर्जनशीलता सीमित गर्न दिनुहुन्न।
चार उपलब्ध संस्करणहरू मिडिया कम्पोजर प्रथम, मिडिया कम्पोजर, मिडिया कम्पोजर अल्टिमेट, र मिडिया कम्पोजर इन्टर्प्राइज हुन्। प्रत्येक संस्करणको बिभिन्न सुविधाहरू छन्, र पहिलेको भन्दा राम्रो। पहिलो संस्करण मिडिया कम्पोजर प्रथम भिडियो सम्पादनमा नयाँ कलाकारहरूको लागि उत्तम हो किनकि यो निःशुल्क हो र आधारभूत भिडियो सम्पादन आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ। अर्को त्यहाँ भुक्तान गरिएको छ र days० दिनको निःशुल्क परीक्षणको लागि उपलब्ध छ।
नि: शुल्क संस्करण उपलब्ध छ
नि: शुल्क परीक्षण संग एक भुक्तान संस्करण उपलब्ध
सरल डिजाइन र सजिलो साझा, आयात, र निर्यात
सशुल्क संस्करणहरूको लागि उच्च मूल्य
मिडिया कम्पोजर99। .$ $ / वर्ष
अन्तिममा।। .99 $ / महिना
चर मूल्यमा उद्यम
Movie. फिल्म निर्माता
यो विन्डोजहरूको लागि उत्तम अन्तिम कट प्रो विकल्प हो र माइक्रोसफ्ट स्टोरमा उपलब्ध छ। तपाईं यस सफ्टवेयरमा तस्वीरहरू, क्लिपहरू, र संगीत प्रयोग गरेर भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर यसको विन्डोज सजिलो ईन्टरफेसको कारण विन्डो प्रयोगकर्ताहरूमा व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ।
भिडियो सफ्ट्वेयर, पृष्ठभूमि संगीत, र पाठ क्याप्शन जस्ता कार्यहरू यस सफ्टवेयरमा तपाईंको भिडियोहरू तीव्र पार्नको लागि गर्न सकिन्छ। छवि फिल्टर, लेनदेन, र जुम प्रभाव जस्ता सुविधाहरू पनि थप्न सकिन्छ। प्रशोधन छिटो छ र स्थिर र उच्च रिजोलुसन भिडियो सम्पादन राख्छ। तपाईं निर्मित ट्र्याकहरूबाट संगीत थप्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको आफ्नै फाईल आयात गर्नुहोस्।
प्राथमिक रूपमा व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको, यसको दुई संस्करणहरू छन्। फिल्म निर्माता १० नि: शुल्क संस्करण हो र सबै आवश्यक भिडियो सम्पादन सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। जबकि फिल्म निर्माता प्रो निश्चित रूपमा व्यावसायिक प्रयोगमा अन्तिम कट प्रो विकल्प छ। प्रो संस्करण भुक्तान गरीएको छ र अतिरिक्त सुविधाहरू र राम्रो गुणस्तर भिडियो सम्पादनको लागि पहुँच अनुमति दिन्छ। सिक्ने भिडियो सम्पादन कलाकारको लागि, यो अनुप्रयोग एक सुरूवात बिन्दु हुन सक्छ।
विन्डोजहरूको लागि नि: शुल्क संस्करण
नि: शुल्क संस्करणमा आधारभूत सुविधाहरू
स्थिर, छिटो, र कुशल
नि: शुल्क संस्करणमा सीमित सुविधा
व्यावसायिक प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको छैन
99.99। एक समय खरीद मूल्य
यो Final Cut Pro वैकल्पिक Final Cut Pro भन्दा बढी प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयर रेन्डरिंग, मोडलि,, sculpting, एनिमेशन, र भिडियो सम्पादनको साथ rigging अनुमति दिन्छ। यसको भिडियो सम्पादन सुविधाले भिडियो कट र स्प्लि like जस्ता आधारभूत सम्पादनलाई अनुमति दिन्छ। सफ्टवेयरले अडियो मिक्सनलाई उच्च गुणवत्ताको भिडियो सम्पादनको लागि पूरक पनि दिन्छ।
अडियो मास्टरिंगमा, यसले स्क्रबिंग, सिnch्कि,, र वेभफर्म भिजुअलाइजेशनलाई अनुमति दिन्छ। आधारभूत भिडियो सम्पादन बाहेक, यसले जटिल भिडियो सम्पादन सुविधाहरू समर्थन गर्दछ जस्तै भिडियो मास्किंग र कलर ग्रेडिंग। सफ्टवेयर खेल विकासकर्ताहरू, एनिमेशन कलाकारहरू, र ग्राफिक डिजाइनरहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। तपाईं गति नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिसनहरू, फिल्टरहरू, र कुञ्जीफ्रेमहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो सम्पादक उपकरणहरू र सुविधाहरूसँग आउँदछ जुन लाइभ पूर्वावलोकन, लुमा वेभफर्म, क्रोमा भेक्टरस्कोप, र हिस्टोग्राम प्रदर्शनहरू जस्ता हुन्छन्। तपाईं एक साथ different२ फरक भिडियोमा काम गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यो sl२ स्लटको साथ आउँदछ। केवल भिडियो मात्र हैन छवि, अडियो, मास्क र प्रभावहरू। यो Final Cut Pro वैकल्पिक एक ट्राउभिल हो किनकि यो प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ र सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको नि: शुल्क भिडियो सम्पादकहरू भन्दा बढी प्रदान गर्दछ।
नि: शुल्क, आजीवन प्रयोग
मुख्य रूपमा भिडियो सम्पादनका लागि होईन
यो अन्तिम कट प्रो विकल्प विन्डोज को लागी उपलब्ध छ। यो भिडियो सम्पादक, सबै तरिकाले, Final Cut को लागि र Final Cut Pro विकल्पहरूको बीचमा पनि एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हो। सम्पादकले आधारभूत भिडियो सम्पादन र प्रशंसनीय द्रुत गतिमा अनुमति दिन्छ। रचनात्मक सम्पादन सुनिश्चित गर्न 50० भन्दा बढी प्रभाव र ट्रान्जिसनहरू समावेश गर्दछ।
प्रिमियम सफ्टवेयरलाई कडा प्रतिस्पर्धा दिन यसले 3D फाइल र 360 360० भिडियो फाईलहरूको सम्पादन र निर्यातको अनुमति दिन्छ। फाईल ढाँचाको एक ठूलो संख्या समर्थन गर्दछ र उच्च-गुणवत्ताको अडियोको साथ भिडियोहरू डेलिभर गर्नको लागि अन्तर्निर्मित अडियो उपकरणहरू छन्। यसको प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सजिलो छ र ड्र्याग एण्ड ड्रप द्वारा भिडियो सम्पादन र आयात गर्न अनुमति दिन्छ।
भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरले साझेदारीलाई अनुमति दिन्छ र साझेदारीलाई कम गर्न DVD सुविधाहरूमा जलाउँछ। तपाईं रंग ट्यून गर्न सक्नुहुन्छ, गति नियन्त्रण, र भिडियो स्थिरीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं 4k देखि 720p र अधिकमा उच्च रिजोलुसनमा लुप्ड भिडियोहरू र भिडियोहरू निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। यसको नि: शुल्क संस्करण गैर व्यावसायिक, उपभोक्ता प्रयोगको लागि उपलब्ध छ। व्यावसायिक प्रयोगको लागि, तपाईं सशुल्क संस्करण खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
सजिलो र सरल भिडियो सम्पादन
ठूलो संख्यामा संक्रमण
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि नि: शुल्क संस्करण
।। .95-, एक पटक भुक्तान
यो Final Cut Pro विकल्प अन्य भन्दा अद्वितीय हो किनकि यो सफ्टवेयर होईन तर एक अनलाइन भिडियो सम्पादन उपकरण हो। एक प्रीमियम भिडियो सम्पादन उपकरण को विकल्प को रूप मा, यो पेशेवरहरु को लागी केहि पछाडि हुन सक्छ। तर दिन प्रतिदिन प्रयोगको लागि, यो उत्तम काम गर्दछ।
मूल भिडियो सम्पादन जस्तै मर्ज, कम्प्रेस, रिसाइज, स्लाइड शो, आदि। यो साइटमा अनलाइन गर्न सकिन्छ। जब तपाईं साइट भ्रमण गर्नुहुन्छ तपाईंले पहिलो पृष्ठमा प्रदर्शित केही आधारभूत उपकरणहरू फेला पार्नुहुनेछ। थप अन्वेषणमा, तपाईं केही थप सुविधाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन सभ्य युट्यूब तैयार भिडियोहरू प्रदान गर्न सक्दछ।
यद्यपि यस साइटले कुनै ग्राहक अनुप्रयोग वा सफ्टवेयर प्रदान गरेको छैन। तपाईं अझै विन्डोज १० मा यसको अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। स्थापना गर्न, माइक्रोसफ्ट एजमा भिडियो खोल्नुहोस्। ठाडो इलिप्सिसमा जानुहोस् र अनुप्रयोगहरूमा जानुहोस्। अनुप्रयोगहरूमा 'यस साइटलाई अनुप्रयोगको रूपमा स्थापना गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस् र संवाद बाकसमा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्। यो डाउनलोड हुनेछ र सुरूबाट चलाउन सकिन्छ। यो गर्नाले सुविधाहरू र उपकरणहरूको पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदछ।
प्रयोग गर्न नि: शुल्क
फोनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
मूल भिडियो सम्पादन उपलब्ध छ
विन्डोजहरूको लागि समर्पित सफ्टवेयर छैन
Da. DaVinci समाधान
अर्को लोकप्रिय भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर पेशेवर भिडियो सम्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। जबकि व्यावसायिक प्रयोग को लागी यसको एक सरल र छिटो प्रयोग डिजाइन छ। यो नयाँ उपयोगकर्ता वा पुरानो पेशेवरहरू हुन। यो अनुप्रयोगले सुविधाहरू र दुबैको गुणस्तर प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयरले प्राय सबै उपकरणहरू एक ठाउँमा सम्पादनको लागि प्रमाणित गर्दछ, जुन त्यस्तो अन्य लोकप्रिय सफ्टवेयरको साथ हैन।
एक सफ्टवेयरमा रंग सुधार, दृश्य प्रभावहरू, र मोशन ग्राफिक्सको एकीकरणले भिडियो गुणस्तरमा कमी रोक्दछ। यस सफ्टवेयरका उपकरणहरू चलचित्रहरूमा सम्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी उपकरणहरू पेशेवर र color्ग कलाकारहरू, सम्पादकहरू, र VFX कलाकार द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
यसको भर्खरको संस्करणमा तपाईले वाइड गमुट एचडीआर, माउस र किबोर्ड आधारित सम्पादन पाउनुहुनेछ। एक उच्च प्रदर्शन अडियो ईन्जिन प्रणालीमा २००० अडियोहरू सक्षम गर्न थपिएको छ। यो ट्रान्जिसन, भिडियो प्रभाव, र शीर्षक, s, आदि को एक ठूलो संख्या छ। यस Final Cut Pro वैकल्पिक एक प्रभावशाली डिजाइन छ र दुबै को एक निःशुल्क र सशुल्क संस्करण को रूप मा उपलब्ध छ।
आवश्यक सुविधाहरू सहित नि: शुल्क संस्करण
थप उपकरण र सुविधाहरू
चप्पी काम गर्दै
असभ्य प्रयोगकर्ता अनुभव
DaVinci समाधान स्टुडियो १ at मा₹ २,,। ००
यो Final Cut Pro वैकल्पिक एक आदर्श विकल्प हो किनभने यसले Final Cut Pro सँग दुबै नुकसानलाई समेट्छ। सर्वप्रथम, यो एक भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर हो जुन विन्डोजको लागि २०० for मा विकसित गरिएको थियो जुन आवश्यकताका उपकरणहरूसँग यो उपयुक्त छ। दोस्रो, यो सफ्टवेयर एक खुला स्रोत भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर हो जसको मतलब यो डाउनलोड गर्न र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ।
यो सफ्टवेयर वास्तवमा एक क्रस-प्लेटफर्म भिडियो सम्पादन उपकरण हो। यसले मिडिया ढाँचा समर्थन, अडियो, भिडियो, र कोडेक्सको एक विस्तृत श्रृंखला समर्थन गर्दछ। सफ्टवेयरलाई आयातको आवश्यकता पर्दैन त्यसैले बहु-ढाँचा समयरेखा, रिजोलुसनहरू, र फ्रेम-दरको साथ नेटिभ सम्पादनलाई अनुमति दिईन्छ।
यसले स्क्रिन, वेबक्याम र अडियो क्याप्चरलाई अनुमति दिन्छ र अधिकतम k के रिजोलुसन समर्थन गर्दछ। यो एक सरल, संगठित, र उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस छ। यसले नियमित अपडेटहरू प्राप्त गर्दछ। यसमा ट्रान्जिसन, भिडियो प्रभावहरू, र आधारभूत अडियो सम्पादन छ। खुला स्रोत सफ्टवेयर भएको कारण यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ त्यसैले शुरुवातकर्ताहरूको लागि प्रयास गर्न उत्तम छ। पेशेवरहरूले पनि यो सफ्टवेयरबाट राम्रो प्राप्त गर्न आफ्नो उन्नत सीप प्रयोग गर्दछन् र निराश हुँदैनन्।
खुला स्रोत र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र
बहु स्वरूपहरू समर्थन गर्दछ
विन्डोजको लागि बनेको यो अन्तिम कट प्रो विकल्पको रूपमा अर्को मनपर्दो विकल्प हो। यो २०० 2005 मा पहिलो पटक सिर्जना गरिएको थियो र त्यस पछि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सफ्टवेयरले तपाईंको भिडियोहरूमा गुणस्तर सम्पादन गर्दछ। सफ्टवेयरले अधिक भिडियो फर्म्याट र सम्पादन गर्न, आयात गर्न, तिनीहरूमा निर्यात गर्दछ। यसले थ्रीडी सम्पादनका लागि पनि अनुमति दिन्छ।यसलाई अन्य Final Cut Pro विकल्पहरू र सफ्टवेयरको बिरूद्ध राख्न, यसको उपकरणहरू ठूलो संख्यामा छन्।
योसँग अडियो बृद्धिका लागि NEWBlue भिडियो फिल्टरहरू, ProDAD भिडियो प्रभावहरू, र VST अडियो प्लग-इनहरू छन्। 4k भिडियोहरूको एक साथ प्रक्रियाको साथ, र color्ग सुधार र यी फिल्टरहरू सफ्टवेयरबाट उत्तम प्राप्त गर्दछन्। सफ्टवेयरसँग एक परिष्कृत Mync प्रोग्राम छ जुन आयोजन, साझेदारी क्लिपहरू, र मिडिया फाइलहरू wallows गर्दछ।
अन्तिम कट प्रो विकल्पको रूपमा, यसले उच्च गतिशील दायरालाई प्रयोगकर्ता-मैत्री बनाउने भिडियोलाई सरल र प्रभावशाली बनाउँदछ। EDIUS आवाश्यक जीवनकाल प्रयोगको साथ एक पटक लगानी हो। एकचोटि खरिद गरेपछि नि: शुल्क र नियमित अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र स्थायी इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुहोस् जब तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ र यसलाई जीवनभर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं 30० दिनको नि: शुल्क परीक्षण संस्करण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सफ्टवेयरको अनुभव पाउन र आफैंको लागि निर्णय लिन।
एक पटक लगानी।
लाइफटाइम प्रयोग इजाजतपत्र
-०-दिन परीक्षण संस्करण उपलब्ध
यो अर्को लोकप्रिय भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर हो। यस शक्तिशाली भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरले तपाईंलाई अचम्मका भिडियोहरू सिर्जना गर्न उपकरणको एक विशाल स with्ख्याले सुसज्जित गर्दछ। यससँग सहज ज्ञान युक्त डिजाइन छ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई सफ्टवेयर मार्फत सजिलैसँग नेभिगेट गर्न अनुमति दिँदछ। यो प्रयोगकर्ताको अनुकूल ईन्टरफेसको साथ भिडियो सम्पादनमा शुरुवातकर्ताहरूको लागि एक उत्तम उपकरण हो।
तपाईं 4k रिजोलुसन सम्म उच्च-रिजोलुसन भिडियोहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले एमपी,, AVI, FLV, MKV, इत्यादि एमपी 3, WAV, M4A, आदि जस्ता अडियो ढाँचाहरू जस्तै बहु भिडियो ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। फोटोहरूमा पनि यसले ठूलो संख्यामा ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। यससँग गति नियन्त्रण, भिडियो काट्ने, विभाजन, घुमाउने, मर्ज र क्रप, रिभर्स, चित्रमा तस्वीर, र मोशन ट्र्याकिंग जस्ता महत्वपूर्ण सुविधाहरू छन्।
यस अन्तिम कट प्रो विकल्पले सम्पादन गरिएका भिडियोहरूको सजिलो साझेदारीको अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगले सामाजिक मिडियामा अपलोड गर्न, DVD लाई जलेको, र IOS र एन्ड्रोइडको साथ अनुकूलताको लागि अनुमति दिन्छ। यो सफ्टवेयर विन्डोजमा नि: शुल्क उपलब्ध छ। तपाईं सशुल्क संस्करणको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ थप सुविधाहरू जस्तै नि: शुल्क अद्यावधिकहरू, अतिरिक्त सुविधाहरू सहित कुनै वाटरमार्क लिन।
नि: शुल्क संस्करण उपलब्ध छ।
निःशुल्क संस्करण संग उपलब्ध आधारभूत र महत्वपूर्ण सुविधाहरू।
फाईल ढाँचाको एक ठूलो संख्या समर्थित छ।
प्रोफेशनलका लागि सिफारिश गरिएको छैन।
एकै पटक धेरै सम्पादन गर्न अनुमति दिँदैन।
भुक्तान गरिएको संस्करण $ 99.9999 / महिनामा
१२. हितफल फिल्म
यो Final Cut Pro वैकल्पिक धेरै सामानले भरिन्छ जहाँ भिडियो कलाकारहरू एक स्थानमा सामान्यतया प्रयोग गर्दछ। यो भिडियो सम्पादनको साथ झुकाव र थ्रीडी उपकरणहरूको लागि अनुकूलित एक सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयरसँग एक विस्तृत-दृश्य दृश्य टुलकिट छ। यस सफ्टवेयरले बोरिसएफएक्सको प्रो झुकाव उपकरणहरू को रूप मा दुनिया मा केहि मान्यता प्राप्त टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
सफ्टवेयरसँग प्रतिलिपि, ट्रिम, र स्लाइस, इत्यादि जस्तै आधारभूत भिडियो सम्पादन उपकरणहरूको संग्रह छ। आधारभूत उपकरणको साथ यसको उपकरणहरू, उत्तम अडियो उपकरणहरू, र एनिमेसन उपकरणहरूको आफ्नै अनोखा संग्रह छ। यो सुविधा जसले राम्रो फाइनल कट प्रो विकल्प बनाउँदछ कि त्यो k के रेजोलुसन भिडियोहरूलाई समर्थन गर्दछ। साथै यसको द्रुत निर्यात गति र -२-बिट फ्लोटिंग-पोइन्ट रंग।
यसले यसको GPU त्वरित प्रणाली प्रयोग गरेर द्रुत प्रशोधन गर्दछ। आवश्यक हार्डवेयर प्रदान गर्यो जस्तै इंटेल GPU सफ्टवेयर प्रयोग गरिए पछि छिटो र सहज हुनेछ। यसले औसत मिडिया ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ र VFX र थ्रीडी मोडलि forको लागि शक्तिशाली टेक्स्चरिंग सुविधाको साथ आदर्श हो। योसँग यो पहिले नै भएको भन्दा राम्रो बनाउनको लागि एक भिडियो स्टेबलाइजर र एक क्रोम कुञ्जी पनि छ।
उत्तम गुण सुविधाहरू र उपकरणहरू
साथै एक महान VFX सफ्टवेयर
व्यावसायिक प्रयोगको लागि उत्तम
शक्तिशाली हार्डवेयर आवश्यक छ
सीमित सुविधाहरूको साथ नि: शुल्क डेमो
पूरा सफ्टवेयर एक पटक buy २०। .40० मा खरीद गर्नुहोस्
१.. अटोडस्क धुँवा
Final Cut Pro को यो वैकल्पिक सफ्टवेयरले उपकरणहरू प्रयोग गर्दै टाइमलाइन-केन्द्रित सम्पादन प्रदान गर्दछ। टाइमलाइन-केन्द्रित सम्पादनले भिडियोलाई प्रत्येक समयमा विन्डोमा उत्तम विवरणमा उत्तम गर्न अनुमति दिन्छ। यसले नोड-आधारित कम्पोजिटि allowsलाई समय रेखा दृश्य बन्द नगरी सजिलै सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं आयात गर्न र थ्रीडी ज्यामिति र पाठहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, यस सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर तपाईंको भिडियोमा थ्रीडी शीर्षक थप गर्नुहोस्। गतिशील ट्रिमिंगले तपाईंलाई समय र गतिको नियन्त्रण दिन्छ। सफ्टवेयरको औसत मिडिया फाइल ढाँचा समर्थन छ। यो Final Cut Pro वैकल्पिक डिमेरेट छ कि यो म्याक र लिनक्सको लागि मात्र उपलब्ध छ।
सफ्टवेयरको औसत हार्डवेयर आवश्यकताहरू छन् र GB जीबी र्याम र इंटेल कोर अडियोको साथ ठीक काम गर्दछ। यो सफ्टवेयर भिडियो प्रभावको एक ठूलो संख्या प्रयोग र भिडियो बृद्धि उपकरणको साथ आउँदछ। यसको नि: शुल्क परीक्षण संस्करण सशुल्क संस्करणको साथ उपलब्ध छ। यो व्यावसायिक प्रयोगको लागि उत्तम हो र शुरुआतका लागि होईन किनकि सम्पादन उपकरणहरू जटिल छन्।
पेशेवरहरूको लागि आदर्श
विन्डोजहरूको लागि उपलब्ध छैन
केवल म्याक र लिनक्सको लागि
जटिल प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस
Version १,6२० मा पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
यो सूचीमा खुला स्रोत भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर हो। यसमा फाइनल कट प्रो विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सुविधाहरू छन्। यो म्याक, लिनक्स, र विन्डोज को लागी उपलब्ध छ। यो एक क्रस-प्लेटफार्म वीडियो संपादक हो। सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सजिलो छ र मानिसहरूले यसलाई छिटो सिक्छन् किनकि यसमा साधारण प्रयोगकर्ता-इन्टरफेस छ।
तपाईं यस सफ्टवेयरमा काट्ने, काट्ने, र ट्रिम गर्ने सबै आधारभूत भिडियो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। मूल कुराको साथ, तपाईं चीजहरू एनिमेट गर्न सक्नुहुनेछ जसले भिडियोमा जीवन ल्याउँदछ। सफ्टवेयरले वाटरमार्क, भिडियो, अडियो ट्र्याकहरू, इत्यादिको लागि बहु लेयरिंग अनुमति दिन्छ। तपाईं सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा रंग समायोजन र भिडियो प्रभावहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं अडियोलाई तरंगको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको भिडियोमा तिनीहरूलाई थप्न सक्नुहुन्छ। प्रभावहरूको साथ तपाईं शीर्षकहरू थप्न सक्नुहुन्छ, थ्रीडी एनिमेटेड शीर्षक र प्रभावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। योसँग ईन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलो छ र भिडियोहरू थप्न ड्र्याग र ड्रप द्वारा सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं समय नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो गति द्रुत वा सुस्त बनाउन, एक कुशल ईन्टरफेस मार्फत अन्तर्क्रिया गर्न।
खुला स्रोत र नि: शुल्क
सबै आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध छन्
सुविधाहरू प्रीमियम भिडियो सम्पादकहरूको रूपमा।
कुनै अतिरिक्त सुविधा छैन
अन्तिम कट प्रो विकल्पहरूको सूचीमा अन्तिम, यो सफ्टवेयर फेरि व्यावसायिक प्रस्तावहरूको लागि व्यापक प्रयोग गरीन्छ। यो धेरै फिल्महरूका लागि प्रयोग गरिएको छ जस्तै पर्खाल सडकको वुल्फ, पल्प फिक्शन, राजाको भाषण, आदि। २०२० को सफ्टवेयर एक प्याकेजमा आउँदछ जुन सबै चीज समावेश गरेर सिर्जना गर्न सकिन्छ, कुनै पनि उद्देश्यको लागि भिडियो सम्पादन गर्नुहोस्।
यो एक सरल डिजाइन प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया र अनुकूलन को वर्ष मा सिद्ध छ। यसले सहज टाइमलाइन सम्पादन र kk रिजोलुसन भिडियोहरूको लागि ट्रिमिंग र सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं सीधा यूट्यूब वा Vimeo निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ 4k रिजोलुसनमा comPromising गुणवत्ता बिना।
यसले ठूलो संख्यामा मिडिया ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ र 32 बिट GPU प्रेसिजनलाई अनुमति दिन्छ। डाउनलोड गर्दा तपाईं a-दिनको नि: शुल्क इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ यसलाई एक परीक्षण संस्करणको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि। यदि तपाईंलाई सही Final Cut Pro वैकल्पिक भेट्टाउनुभयो भने, तपाईं फरक समय मान्यताको साथ नयाँ भिन्नै पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोमा अपग्रेड गर्न, तपाईंले भर्खर दर्ता गर्नुपर्नेछ र फिल्महरू सम्पादन गर्न प्रयोग हुने सुविधाहरूको पहुँच पाउनुहुनेछ।
लोकप्रिय र प्रयोग गर्न सजिलो
नि: शुल्क--दिन परीक्षण उपलब्ध
शुरुआतीहरूको लागि सिफारिश गरिदैन
$ २..99 / / महिना
अन्तिम कट प्रो निस्सन्देह सबै भन्दा राम्रो भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर हो, यसैले विन्डो प्रयोगकर्ताहरूलाई यस सफ्टवेयरको लागि वैकल्पिक आवश्यक छ। तर यससँग यसको अंशको अंश छ र केही पनि साँच्चिकै उत्तम रूपमा निःशुल्क आउँदैन, Final Cut Pro को मामलामा, किफायती!त्यसो भए यी अन्तिम कट प्रो विकल्पहरू सस्तोमा के आउँछन्, केहि मामिलाहरूमा नजिकको उत्तम सुविधाहरू र उपकरणहरूको साथ निःशुल्क पनि हुन्छन्। व्यावसायिक वा उच्च-गुणवत्ता भिडियो सम्पादनका लागि म्याक किन्न यो आवश्यक छैन। तपाईंलाई चाहिने सबै यस सफ्टवेयर मध्ये एक हो जुन तपाईं किन्नुहुन्छ र कोर्स कौशलता।
उनीहरूको प्रयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइनले यो सम्भव हुन सक्छ कि तपाईलाई कुनै पनि पूर्व शर्त सीपको आवश्यकता पर्दैन। यो सफ्टवेयरले गुणवत्ता वा पैसाको चिन्ता नगरिकन तपाइँको सृजनात्मकताको लागि मार्ग प्रदान गर्दछ। सुरु गर्नुहोस् र हुनसक्छ ती सबै कोशिस गर्नुहोस्! (कम्तिमा नि: शुल्क व्यक्ति)
Q. त्यहाँ Final Cut Pro को कुनै विन्डोज संस्करण छ?
बर्षवर्तमानमा, होइन। तर माग र सफ्टवेयरको लोकप्रियता दिईएको छ भविष्यमा एक जारी हुन सक्छ। यस बाहेक, तल दर्साइएका पेनहरूको रूपमा त्यहाँ थुप्रै विकल्पहरू छन् जुन प्रायः समान गुणस्तरको नतिजा प्रदान गर्दछ। तपाईं केही लोकप्रिय विन्डोज सम्पादन सफ्टवेयर को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै Adobe वा Corel Final Cut Pro-like अनुभव प्राप्त गर्न।
Q. त्यहाँ Final Cut Pro को नि: शुल्क संस्करण छ?
बर्षFinal Cut Pro को कुनै नि: शुल्क संस्करण छैन तर तपाईं यसलाई परीक्षण संस्करणको रूपमा days ० दिनको लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ सफ्टवेयर खरीद गर्न निर्णय गर्नु अघि तपाइँ पूर्ण अनुभव र सही विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 90 ०-दिनको परीक्षण तपाईलाई यो निर्णय गर्न को लागी पर्याप्त छ कि यो यसको लायक छ वा तपाईसँग स्वतन्त्र संस्करणबाट तपाईसँग सबै छ।
Q. म कसरी विन्डोजको लागि Final Cut Pro नि: शुल्क पाउन सक्छु?
बर्षयस प्रश्नको सरल र पूर्ण उत्तर हो, तपाईं सक्नुहुन्न। तर तपाईं निराश हुनु हुँदैन किनकि तपाईं यसलाई म्याकमा नि: शुल्क पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईं नि: शुल्क भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको सिर्जनात्मकताले सिर्जना गर्न सक्ने उत्तम परिणामहरू दिन्छ र तपाईंको डेस्कटपले यसको हार्डवेयरको साथ एकत्रित गर्न सक्छ। नि: शुल्कका लागि उत्तम सफ्टवेयर मध्ये एक, विन्डोजहरूको लागि अन्तिम कट प्रो विकल्प ओपनशट हो।
उत्तम ग्यारेजब्यान्ड विकल्पहरू
कूल खेलहरू जुन रोकिएको छैन
अनब्लक गरिएका खेलहरू स्कूलमा Io slither
स्थानहरू टिभी कार्यक्रमहरू डाउनलोड गर्न
अमेजन उपहार कार्ड कोड काम गरिरहेको छैन
डाउनलोड बिना नै फिल्म अनलाइन निःशुल्क हेर्नुहोस्
mp3 यूट्यूब कन्भर्टर नि: शुल्क डाउनलोड